ရင်ခုန်ကင်းဝေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ရင်ခုန်ကင်းဝေး
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Feb 7, 2012 in My Dear Diary | 16 comments
ဒီနေ့ညနေအလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်တော့ တီဗွီက အကယ်ဒမီအကြောင်းလာနေတာကိုတွေ့တော့
ဆရာဦးကြည်စိုးထွန်းက နှစ်အလိုက်အကယ်ဒမီရတာလေးတွေကို တစ်နှစ်စီအလိုက် အသေအချာပြောပြနေတာကိုတွေ့ရတော့ စိတ်ထဲမှာဟိုအရင်ခေတ်က
ဟိုးအရင်ရုပ်ရှင်တွေခေတ်ကောင်းချိန်တုံးကဆိုရင် အကယ်ဒမီနီးပြီဆိုတာနဲ့ စိတ်ထဲမှာရစေချင်သူကို
ပြောကြ ၊အချင်းချင်းလဲ ငြင်းကြနဲ့တကယ်ကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ရင်ခုန်စရာကောင်းလှပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုံးက တစ်နှစ်တစ်နှစ် ရုံတင်တဲ့ကားတွေကလဲ အများကြီး။
မင်းသားမင်းသမီး တွေ ဇာတ်ပို့တွေကလဲအများကြီး ။
ကျနော်တို့ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေမှာလဲ ကိုယ်ကြည့်ဘူးတဲ့ကားထဲက သရုပ်ဆောင်တာကြိုက်တဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေကို ရစေချင်တာအမှန်ဘဲ။
အများအားဖြင့် တော့သရုပ်ဆောင် ကောင်းတာ မကောင်းတာထက်
အဲတော့လဲ ဒီပွဲမရောက်မခြင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ငြင်းကြရတာအမောပါဘဲ။
မောရုံတင်မက အရှိန်မြင့်သွားရင် စကားများကြစိတ်တွေကောက်ကြပေါ့။
ဒီအကယ်ဒမီအကြောင်း နဲ့ပြောကြဆိုကြ သဘောတူကြ သဘောကွဲလွဲကြနဲ့ အလုပ်ကိုဖြစ်လို့ပါဘဲ။
နောက်နေ့မနက်သတင်းစာလာမှဘဲ ဘယ်သူရတယ်ဆိုတာကို အတည်ပြုကြပါတယ်။
ဘယ်သူက ရသင့်တာ ဘယ်သူကတော့ မရသင့်ဘူး ဘယ်သူကတော့သနားပါတယ်ဆိုပြီး
ကိုယ်အမျိုးအဆွေတွေအကြောင်းပြောသလို ပြောနေကြတာ မပြီးနိုင်မစီးနိုင်။
ဒါကတော့ ရှေးကတီဗွီတွေ စလောင်ေးတွမပေါ်ခင်ကအဖြစ်အပျက်လေးတွေပါ.။
သတင်းလာချိန်ဆို တစ်သက်လုံးမဖွင့်တဲ့အိမ်ကတောင် တီဗွီဖွင့်ထားအောင်ဆွဲဆောင်မူ့အား
တီဗွီကသတင်းထဲမှာ ထည့်ကြေငြာပေးတော့ မြင်လဲမြင်ကြားလဲကြားရဆိုတော့ အာသာပြေပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အကယ်ဒမီပေးပွဲကို တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ပေးတဲ့အထိ အဆင့်မြင့်လာပါတယ်။
ကြည့်တဲ့လူတွေကလဲပိုစိတ်ဝင်စားလို့ အဲလိုနေများဆိုရင် အလုပ်တွေတောင်စောစောသိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲကိုလာကြတဲ့ မင်းသားမင်းသမီး တွေရော ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေရော တ၀ကြီးကိုမြင်ရတာပါ။
ဘယ်သူက ဘယ်လိုလှတာ ဘယ်လိုလေးဝတ်ထားတာကို လက်ညှိုးလေးတထိုးထုိးနဲ့ပြ
သူတို့ရဲ့ လျှပ်တစ်ပြက်ပုံရိပ်တွေကို မြင်ရပါတယ်။
အဲဒါတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ပရိသတ်တွေက တကယ်ရသင့်တယ် မရသင့်ဘူးဆိုတာ
တီဗွီကြည့်ရင်းကနေငြင်းလိုက်ခုန်လိုက်ကြတာနောက်နေ့ကူးသွားတာကို ဘဲ ပြန်ပြေလို့
ဒီအကယ်ဒမီဆုပေးပွဲကို ဟိုရှေးရှေးက ရေဒီယိုကနားထောင်ရုံသက်သက်။
နောက်တော့ တီဗွီကလာတဲ့သတင်းမှာ အမြည်းပေးသလိုကြည့်ရ။
ဟောအခုခေတ်မှာတော့ အစအဆုံးတိုက်ရိုက် တ၀ကြီးကြည့်ရပါတယ်။
အကယ်ဒမီရမှ အိမ်ထောင်ကျနေတာ ကြာပေါ့လို့လူသိရှင်ကြားဖြစ်သွားတာ။
အကယ်ဒမီရမှ အားရပါးရလူကြားထဲအနမ်းခံလိုက်ရတော့ ပါးပြင်မှာ နုပ်ခမ်းနီရာတွေစွန်းသွားတာ။
အဲဒီကစလို့အကယ်ဒမီဆိုရင် ကျားကျားမမ လူအများရှေ့မှာ ပါးကို နမ်းပြကြတာ။
အကယ်ဒမီရမယ်ထင်ပြီး သဇင်ပန်းတွေဝေနေမှ အကယ်ဒမီနဲ့လွဲတာ။
အကယ်ဒမီရမယ်ထင်ပြီး ဧည့်ခံပွဲလုပ်ဘို့ စီစဉ်ထားပြီးမှ အကယ်ဒမီနဲ့လွဲသွားတာ။
အကယ်ဒမီရပြီးလို့ ၀မ်းသာစကားပြောမှ မာန်တွေတက်နေတာကိုမြင်ရတာ။
အကယ်ဒမီအတွက်ဝမ်းသာစကားပြောမှ ၀မ်းသာလွန်းပြီး အိုးနင်းခွက်နင်းဖြစ်နေတာ။
အကယ်ဒမီရသူကို ဇွတ်လိုက်နုတ်ဆက်လို့ ရိုက်သမျှ ဓါတ်ပုံမှန်သမျှထဲကိုယ်ပါအောင် လူလုံးပြတာ။
အကယ်ဒမီရသူကို ကြေငြာပေးသူက စကားမပြောတတ်တော့စိတ်မပါလက်မပါပုံပေါက်နေတာ။
(ကျနော်အကြိုက်ဆုံးကြေငြာသူကတော့ “တားတား စားချင်တာစားလို့ရပြီ”လို့ ကြေငြာသွားသူကိုပါဘဲ)
အကယ်ဒမီရသူတိုင်းပြောနေကျလိုဖြစ်နေတဲ့” ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
တစ်ချို့ကြပြန်တော့လဲ အဖေအမေထက်ချစ်တဲ့ မောင်မောင်ရယ်လို့တောင်စင်ပေါ်က ကြွယ်သွားတာမျုိးလဲရှိပါတယ်။
သူထက်ငါ လှသထက်လှ ယဉ်သထက်ယဉ်အောင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။
အနုပညာနယ်ကို ချဘို့ ခြေတစ်လှမ်းစရသူဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး။
လဲပြန်ပြတတ်တာ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာဘဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အကယ်ဒမီပွဲပြီးလို့ တမေ့တစ်ဆွေးနေမှ ဗဟိုသတင်းစဉ်က ပြမှ ကြည့်ရတာပါ။
အခုခေတ်မှာတော့ အကယ်ဒမီဆုကြေငြာပြီးတာနဲ့ တစ်ခါထဲ အကယ်ဒမီရသူရဲ့ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ကွက်တွေပြန်ပြပါတယ်။
အဲတော့လဲဘယ်လို သရုပ်ဆောင်လို့ အကယ်ဒမီရတယ်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေသိလာပါတယ်။
ကိုယ်မှန်းတာနဲ့လွဲတော့ လဲ စိတ်ဆင်းရဲရတာပေါ့။
တကယ်ပြောရရင်တော့ ဒါတွေက ရုပ်ရှင်ခေတ်ကောင်းစဉ်ကာလကပါ။
အားလုံးက လွယ်လွယ်ရိုက် လွယ်လွယ်ပြလို့ရတဲ့ ဗွီဒီယိုဘက်ကို ကူးသွားကြလို့ဆိုရင်လဲ
အရင်က ရှေးမင်းသားမင်းသမီးကြီးများဆိုရင် တစ်နှစ်ထဲမှာကို ရိုက်ထားတဲ့ကားတွေအများကြီး
ထဲကမှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြိုင်အဆိုင် အကယ်ဒမီရွေးပေးရတော့ ဆင်ဆာလူကြီးမင်း
အကယ်ဒမီ နတ်ကြီးတယ်ဆိုရလောက်အောင် အကယ်ဒမီတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဘို့ခက်ခဲလှပါတယ်။
တကယ်ကြိုးစားမှ တကယ်တော်မှ ဆိုတာတင်မလုံလောက်သေးဘဲသူများနဲ့ပြိုင်ရင်သာမှ
အဲတော့လဲ အကယ်ဒမီဆု အများကြီးရဘို့ဆိုတာ တကယ်ခက်ခဲတာသိသာပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ ပိုတော်လာတယ်လိုယူဆနိုင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ထဲကို အကယ်ဒမီ တရွှတ်ရွှတ်နဲ့ရနေကြတာ မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လို့သာယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။
ရှေးခေတ်ကလို ရေဒီယိုက သာကြေငြာပေးရင်နားကြားလွဲတယ်တောင်ထင်ရလောက်အောင်
ဒီလူဒီလူဘဲထပ်လာတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်ကလဲ ဘယ်သူရမယ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားမူ့လျော့လို့
ပရိတ်သတ်အာရုံစိုက်တော့ မိန်းကလေးတွေသာမက ဘဲ ယောကျာ်လေးတွေပါ အဆန်းထွင်
ပရိတ်သတ်ကတော့ အကယ်ဒမီနီးတာနဲ့ မရဘူးသေးသူကို ရစေချင်လို့အသံတွေထွက်လာပါတယ်။
အကြားရဆုံးအသံကတော့ မပွတ်ကျွတ်လေးကိုရစေချင်လို့ ဆုတောင်းပေးတဲ့အသံပါဘဲ။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှ နာမည်ကျော်ပေမယ့် အကယ်ဒမီမရဘူးသူ သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီးများလဲ
အထင်ကရပြောရရင် ကျော်ဆွေ တွံတေးသိန်းတန် ဇော်ဝမ်း တို့ပါဘဲ။
ပရိတ်သတ်က ကြိုက်လဲကြိုက် ချစ်လဲချစ် သရုပ်ဆောင်လဲကောင်းပေမယ့် အလွဲကြီးလွဲသူပေါ့။
အကယ်ဒမီကို မှန်းပေးတဲ့အထဲမှာ ကျနော်လဲပါဘူးတာပါဘယ်။
သင်္ကြန်မိုးမှာတစ်ခါ ဒဏ္ဍာရီမှာတစ်ခါ ဇင်ဝိုင်းကိုရစေချင်မိတာပါ။
နောက်ထူးခြားတာလေးကတော့ အကယ်ဒမီရတဲ့ကားတွေကြည့်လိုက်ရင် သနားစရာဇာတ်ကောင်အခန်းမှာသရုပ်ဆောင်သူတွေဘဲရတာများပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြား လိုပြောရရင် အလွမ်းအဆွေးမပါဘဲသွက်သွက်လက်လက်သရုပ်ဆောင်လို့
ရဘူးသူကတော့ ကိုယ်ရယ်တိုးရယ်စိုးစိုးရယ်ကားက ခင်သန်းနုပါဘဲ။
ဒီအကယ်ဒမီရွေးချယ်သူ အဖွဲ့ရဲ့ မူဝါဒကလဲ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ခေတ်စနစ်အပေါ်မှာ
ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်ကတော့ မိဘမေတ္တာဘွဲ့တွေ အခြေခံလူတန်းစားကိုအရင်းခံတဲ့
ဟာသမင်းသားလို့နာမည်ကြီးတဲ့စိန်မြင့် အဖေတစ်ခုသားတစ်ခုမှ အလွမ်းဇာတ်နဲ့
ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ဇာတ်ရုပ်နေရာက အကယ်ဒမီရဘူးသူကတော့ တစ်ယောက်ထဲဘဲရှိဘူးပါတယ်။
အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ တစ်နှစ်တစ်နှစ်ရုံတင်တဲ့ကားနည်းတည်းလေးတဲမှာ အင်မတန်မှ
ကိုနည်းပါးလှတဲ့သရုပ်ဆောင်ကိုဘဲ ရွေးရတော့ အပြိုင်အဆိုင်နည်းလှတဲ့အကယ်ဒမီဆိုတော့
အကယ်ဒမီဆိုတာ ခုခေတ်မှာ အလာပသလာပ ဖြစ်သွားပြီ
မရခင်ထဲက သိတော့ ဘာထူးမှာလဲနော့
ဟုတ်ပါ့ မဖရဲ ရေ … ကြိုပြီးသိနေတာကြီးကတော့ မကောင်းပါဘူး..
ကိုပေါက်ရေ ကျွန်တော်တို့ကတော့ TV မကြည့်ဖြစ်တာကြာပြီဗျာ..
စလောင်းက လာတာတွေပဲ ကြည့်ဖြစ်နေတယ်
မြန်မာကား တို့ သတင်း တို့ဆိုရင် မကြည့်ကို မကြည့်ချင်တော့တာ
ပြောပြန်ရင်လဲ ချစ်ရင်ထူးနှစ် လွန်ရာကျဦးမယ်..
ငါတော့ လုံးရာက ပြားတော့မယ်
ပြားလည်း ကိစ္စတော့ သိပ်မရှိ
ရွာထဲက မယ်ပေါက်ဖော်နဲ့ အကယ်ဒမီမှာ ဗန်းသွားကိုင်မယ်
မဖျဲ ဆိုလို့ ၀င်မန့်မလို့ ရှိသေး…
အဟီး …နီ ..ကံကောင်းလို့
မတိရို့ဘာနော် မဖရဲ အဲလေ ကိုဖရဲ..
ဦးပေါက်ရေ .. စင် အပြင်အဆင်နဲ့တစ်ကွ အားပေးသူများ ၊ Lighting ၊ Digital Mappint ၊ Projector ၊ ကောဇောနီများနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်များနှင့် မတူ တစ်မူထူးခြားစွာ တင်ဆက်ပြမယ် ဆိုတော့ ဒီညနေ ၅နာရီက စလို့ အားပေး လိုက်ဦးပေါ့ ။
အဝေးရောက်နေသူများ အလွမ်းပြေ အားပေးလို့ရအောင် MRTV3( Myanmar International) ကလည်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်တဲ့ ။ ၇-၂-၂၀၁၂ မြန်မာစံတော်ချိန် ၅ နာရီလို့ ကြားမိပါသည် ။ GMT 10:30 နာရီဖြစ်ပါမည်။
ကိုပေါက်ရဲ့ ………… ရင်ခုန်ကင်းဝေး အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ …
ကျွန်တော်ကတော့ ……………. “ကိုယ်ရရင် ရနေမှာ ဆိုပြီး အမှန်တကယ် ရင်ခုန် နေပါတယ် ” ။
နော်ရရင် ကိုပေါက်ကြီးကို ကော်ဖီတိုက်မယ် …. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ … မနေ့က Ph မှာ Super Coffee က မင်းသား၊ မင်းသမီး နဲ့ ဒါရိုက်တာ ဆုမှန်ရင် ဆုပေးမယ်ဆိုလို့ … SMS လေးပို့ ထားတာ ပြောတာပါဗျာ
မန္တလာပေါက်၊ရွှေမန်းစိန်ကီး၊ ရန်ကုန်လုလင်၊ မန်းရွှေမင်းသား၊ မဟာရန်ကုန်မဲချော၊
ညနေ TV ရှေ့  ထိုင်ချင်ပေမဲ့ အလုပ်ရှိသေးတယ်။
ကိုပေါက်ရေ… ကျေးဇူးတင်စကားကို မာမီလာမှပြောနော်။
လေးပေါက် ကျေးဇူးတင်စကားပြောရင် တိုတိုပဲ ပြောနော် အရှည်ကြီး ပြောရင် အနော်တို့က အိပ်ငိုက်တတ်တယ် ။ တော်ကြာ ကျေးဇူးစကား အရှည်ကြီး ပြောလို့ဆိုပြီး မယ်ပေါက်ဖော်က စင်ပေါ်တက်ပြီး လင်ပန်းကြီးနဲ့ လာထုနေအုန်းမယ် ။
ပြောရရင် သများတော့ မြန်မာကားတွေမှာ ဟာသကလွဲ၍ အပီအပြင်ရိုက်တဲ့ကား တစ်ကားမှမကြိုက်
အပီအပြင်ရိုက်ကြမှ တလွဲတွေဖြစ်လို့ ..ပေါက်ကရလောက်ပဲကြည့်တယ်..
သများတို့ ကို အကယ်ဒမီပေးဘူးလားဟင်..
အကယ်ဒမီ ပေး..ပေး..မပေးပေး.ပါ..သဂျီးတူမပေးရင် ကျေနပ်ပါပြီ
အကယ်ဒမီကလဲသူ့ကြည့်ရတယ်မထင်ရဘူး။ ကြေငြာကြည့်နေရတယ်မှတ်တာပဲ။ အကယ်ဒမီပွဲကမင်းသား မင်းသမီးပြတာနဲနဲကြေငြာထဲကမင်းသားမင်းသမီးကြည့်ရတာများများမို့အရင်ကလိုအကယ်ဒမီပေးပွဲကို ရင်မခုန်ချင်တော့ပါဘူး။
မနှစ်ကစပြီး အကယ်ဒမီကို ရင် မခုန်တော့ဘူး .. စကာတင်စာရင်းမှာ .. အပျော်တမ်းဟာသကားတွေအတော်များများ ပါလာကတည်းကပဲ … ။ ပင်လယ်ကမ်းခြေကို ဗဟိုပြုပြီး ရိုက်တဲ့ ကားတွေ ၊ မင်းသမီးနဲ့ မင်းသားက ပေါတောတောရယ်စရာလုပ်ပြတဲ့ ကားတွေကို အကယ်ဒမီ စကာတင်စာရင်းထဲ ဘယ်လို အချက်တွေနဲ့ … ထည့်လိုက်သလဲ … တွေးရင်း နားမလည် ဖြစ်မိပါတယ် ။
ထူးခြားတာကလူကြားထဲမှာ မိန်းမက ယောက်ျား လေး ပါးနမ်းတာ မြန်မာဓလေ့ထုံးစံ
ကိုပေါက်ရေ- ကော်ဖီမစ်ထုပ်မှာ အကယ်ဒမီမှန်းပြီး ဖြည့်ပေးရတဲ့ လပ်ကီးဒရော ထည့်ပေးတာရတော့ ဘာကားတွေပြပြီး ဘယ်မင်းသားမင်းသမီးတွေ ရိုက်နေမှန်းကို မသိတော့ ဖြည့်ကို မဖြည့်လိုက်ရဘူး။ ကိုယ်တင် မသိတာလားဆိုပြီး အလုပ်က ကောင်လေးတွေ၊ ကောင်မလေးတွေ မေးကြည့်တော့ သူတို့လည်း မသိဘူးတဲ့။